Niverina tany Irak Avaratra ny Krismasy
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Irak » Niverina tany Irak Avaratra ny Krismasy
Vao herintaona lasa izay i Mosul no fonenan'ilay lazaina ho kalifa any Irak.
Miaraka amin'ny fahirano olona 1.8 tapitrisa, ny volana desambra dia fotoana nampiasan'ny mponina fanaka taloha sy hokapaina hazo mba hanafana sy handrahoana izay sakafo maloto azo alaina ao, anisan'izany ireo ahidratsy amina amoron-dalana sy saka very.
Androany, na dia miditra amin'ny fialantsasatra amin'ny ankapobeny aza ny Kristiana manerana ny faritra amin'ny faritra afovoany Atsinanana mikorontana, ireo vondrom-piarahamonina armeniana, asyrianina, kaldean ary syriac any avaratr'i irak dia manana zavatra manokana ankalazana.
Niseho teny amin'ny tsena ny hazo krismasy ary tazana teny amin'ny araben'i Mosul i Santa Claus.
"Mety ho hafahafa ny mandre fa nisy Santa Claus vehivavy niseho teto amin'ity tanàna ity," hoy i Ghenwa Ghassan, XNUMX taona. “Saingy tiako ny hanome fanomezana tsotra ny olona eto - hitondra Krismasy amin'ny toerana efa noroahina.”
Miakanjo toa Dadabe Noely, Ghassan nizara kilalao sy kojakojam-pianarana ho an'ny ankizy kristianina sy silamo tao amin'ireo araben'ireo vato be nipetraka tao Old Mosul.
Taorian'ny fanjakan'ny ISIS nandritra ny telo taona, izay nahitana famonoana, fakana an-keriny, ary fandroahana ny Kristiana avy tany Mosul sy ny manodidina azy, ny fiverenan'ny Krismasy dia manamarika fotoana fanantenana fa mety ho maro ny olona afaka miverina miaraka amin'ny fialantsasatra.
"Nandany ny alina nandravaka ny tanànantsika tamin'ny jiro toy ny fanaontsika taloha ny ISIS," hoy i Bernadette Al-Maslob, arkeology sivy amby dimam-polo taona, ao Karamlesh, valo ambin'ny folo kilometatra atsimoatsinanan'ny Mosul.
Ny Kristiana Kaldeanina, Asyrianina ary Syriàka izay monina ao amin'ny tanànan'ny Nineveh Plain dia mandrehitra "Afo Krismasy" ao an-tokotanin'ny fiangonany taloha - izay maro no nolotoin'ny ISIS.
"Ny fankalazana ny Noely eto dia hafatra iray, fa na eo aza ny fandrahonana, fanenjehana, famonoana ary ny zavatra natrehinay tany Irak, dia manantena izahay fa hiova ity firenena ity," hoy ny Rev. Martin Banni, pretra katolika Kaldeanina. Mampiharihary ny teboka, ny Fiangonana Kaldeana no mizara hazo krismasy.
"Ny lamesa krismasy farany teto dia tamin'ny taona 2013. Ankehitriny, nesorina indray ny lakroa teo amin'ny Fiangonan'i St. Paul," hoy i Banni tamin'ny The Media Line.
Ny silamo tsy miankina sy malala-tanana koa dia mahazo fampiononana amin'ny fiverenan'ny Noely - nilaza izy ireo fa ny firehan-kevitry ny ISIS dia nandrahona ny fomba fiainany tahaka ny nataony ho an'ny Kristiana ao amin'ny faritra.
"Nampihetsi-po sy latsaka ny ranomaso ny niditra tao amin'ny kilasiko maraina ka nahita ilay hazo krismasy nirehitra taorian'ny telo taona nanjakan'ny ISIS," hoy i Ali Al-Baroodi, 29 taona, mpampianatra anglisy ao amin'ny Departemantan'ny Fampianarana ao amin'ny Mosul University Faculty of Arts.
Betsaka ny Kristiana no niverina tany amin'ireo faritra maoderina any atsinanan'i Mosul noho ireo faritra manan-tantara toa an'i Hosh Al-Bai'ah any andrefana izay misy ireo villa Ottoman, fiangonana kristianina asyrianina ary kaldeanina talohan'ny faharavan'i ISIS.
"Omaly, nisy andiana tanora Mosul nanadio fiangonana teto hahafahan'ny Kristiana mankalaza, manatrika ny lamesa ary maneno lakolosy," hoy i Saad Ahmed, Silamo 32 monina ao Mosul Atsinanana. “Voaravaka hazo krismasy sy sary Dadabe Noely ny trano fisakafoanana sy fivarotana.”
Saingy ny fiangonana hafa dia mbola simba na nalain'ny governemanta ihany - ohatra ny fiangonana ao amin'ny Distrikan'i Al-Muhandisin dia lasa fonja ankehitriny, "hoy i Ahmed tamin'ny The Media Line.
Ny fankalazana tany Iràka dia tonga taorian'ny fararano iray izay nanenjika ny Kristiana maro nandao ny tranony tany amin'ny lemak'i Ninive, dia nanana Kristiana 1.5 tapitrisa teo ho eo tamin'ny fiandohan'ny fanafihana amerikana 2003.
Ny vondrona fanampiana sy mpiaro ny kristiana dia mino fa ny isan'izy ireo dia mety ho ambany 300,000 ankehitriny.
"Mitohy ny fifindran'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa satria mbola lavitra ny vintana hahita fitoniana tafaverina amin'ny laoniny," hoy i Mervyn Thomas Chief Executive ao amin'ny Christian Solidarity Worldwide monina any London.
Nilaza ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina fa ny fiverenan'ireo Kristiana tanteraka amin'ny tanànany ao Mosul sy ny manodidina azy dia tsy azo inoana amin'ny ho avy.
"Ny Fiangonana Kaldeana dia manana fandaharam-potoana politika, miarahaba ireo miverina sy manala baraka an'ireo izay miala", hoy i Samer Elias, mpanoratra Kristiana avy ao Mosul izay nitady fiarovana any Kurdistan Irak taorian'ny fanafihana ISIS.
“Rehefa miverina aho dia mahatsiaro ho vaky satria ny mpifanila vodirindrina amiko nijoro teo ary nijery ny fanananay norobaina teo imasony. Betsaka loatra no nividy ny foto-pisainana fa tsy mpino na Dhimmis isika, ”hoy i Elais tamin'ny The Media Line.
Evon Edward, psikolojista klinika ao Alqosh- mpikatroka Kristiana Asyriana ao amin'ny lemak'i Ninive– dia nilaza fa ny haingon-trano fialantsasatra sy ny fombafomba mahazatra dia tsy afaka mampitony ny fanahiany momba ny taona ho avy.
"Eny misy hazo mirehitra ary ny olona miresaka momba ny fiomanany ho an'ny fety," hoy i Edward. ”Mbola voa mafy amin'ny fiarahamonina ny vondrom-piarahamonina, mankalaza fanao amin'ny fahazaran-dratsy sy fihetseham-po mangatsiaka ny olona noho ny fahazaran-dratsy.”
SOURCE: Ny tsipika Media
Cancun fizahan-tany: herisetra ataon'ny andian-jiolahy, famonoana olona, ​​fanendahana fiara, sakafo misy poizina, herisetra ara-nofo ary polisy mitam-piadiana